Mareykanka oo ku dhawaaqay in 14 bilood gudahood uu ciidamadiisa uga saari doono Afghanistan.
Saturday February 29, 2020 - 19:06:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa soo gaba gaboobay wadahadalladii udhaxeeyay Imaarada islaamiga Afghanistan (Taliban) iyo dowladda Mareykanka.
Heshiis kama dambays ah oo dhigaya in ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan gabi ahaanba wadanka Afghanistan ayaa maanta ka dhacay magaalada Dooxa ee caasimadda wadanka Qadar.
Heshiiskan oo labadan dhinac ay ukala saxiixeen Mulla Baraadar iyo Zalmay Khaliilzad ayaa ka kooban qodobo dhowr ah waxaana ugu muhiimsan in muddo 135 maalmood gudahood 8600 askari American ah laga saaro Afghanistan.
in 9 bilood illaa 14 bilood gudahood gabi ahaanba ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan ciidda wadanka Afghanistan, sidoo kale qodobada heshiiska waxaa kamid ah in bisha Agoosta ee soo socota Taliban laga saaro dhammaan xayiraadihii lagusoo rogay sanaddii 2001 sida iyo in liiska Argagaxisada laga saaro.
Qodobada kale ee heshiiska kujira waxaa kamid ah in dhulka Afghanistan uusan noqonin meel laga abaabulo weeraro ka dhan ah Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Washington oo ku sugnaa madashii heshiiska lagu saxiixayay ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay in ciidamada Amerianka ah lagasoo saaro Afghanistan kadib 19 sano oo ay duullaan ku joogeen.
Waxaa xusid mudan in heshiiskan uu si toos ah u dhaxmaray Mareykanka iyo Imaarada islaamiga ah islamarkaana aysan wax lug ah ku laheyn xukuumadda camiilka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Kabul